अस्पताल बाहिरै विरामीको उपचार ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २७ चैत, पर्वतकी इन्दिरा शर्माले चार महिना कुरेर पित्तथैलीको अपरेशनका लागि पालो पाएकी थिइन् । तर चिकित्सकको आन्दोलनले उनको अपरेशन हुन सकेको छैन । यही चैत २० गते उनी अपरेशनका लागि भर्ना भइन् र २२ गते अपरेशनका लागि तयार हुँदा चिकित्सकले उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि उनी घर फर्कन बाध्य भइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले चार महिना कुरेर पालो पाएकी थिएँ । २० गते भर्ना भएँ तर २२ गते अपरेशन गर्ने बेलामा डाक्टरले हुँदैन भने ।’ एक दुई दिनमा समस्या समाधान नभएर निजी अस्पतालमा जाने उनको तयारी छ ।
यता सरकारी चिकित्सकले आजदेखि अस्पताल बाहिरै ओपिडी सेवा दिन सुरु गरेका छन् । ६ दिनदेखि उपचारको पर्खाइमा रहेका बिरामीलाई केही राहत मिले पनि जटिल खालका उपचार गर्नुपर्ने बिरामी अझै पनि मारमा छन् । अस्पताल बाहिर ओपिडी सेवा सन्चालन गरे पनि अपरेशन तथा भीडियो एक्सरे जस्ता सेवा भने अझै पनि प्रभावित छन् । अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीको अपरेशन हुन नसक्दा उनीहरु निजी क्लीनिकमा जाने अवस्था छ ।
बुधवार बिहान सरकारको दबाबपछि वीर अस्पतालको प्रशासनले प्रहरी खटाएर टिकट काउन्टर खुलाएका थिए । तर ६ दिनदेखि स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका सरकारी चिकित्सकले अस्पतालमा उपचार गर्न मानेनन् । बरु अस्पताल बाहिरै ओपिडी सेवा सन्चालन गरेका छन् । त्यो पनि अस्पतालको टिकटमा नभइ सरकारी चिकित्सक संघको लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरी ।
आफ्ना माग पुरा नभएसम्म यसरी नै अस्पताल बाहिरै सेवा दिने सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए । उनी भन्छन्, ‘बिरामीलाई सेवा दिनु हाम्रो धर्म हो । सरकारले हाम्रो माग पुरा नगरे पनि हामीले अस्पताल बाहिरबाट भएपनि उपचार दिएका छौ । सरकारले माग पुरा नगरुन्जेल यसरी नै सेवा दिन्छौ ।’
सरकारी चिकित्सकले पछिल्लो समय आन्दोलन थालेको ६ दिन भइसकेको छ तर सरकारी स्तरबाट हालसम्म कुनै पनि ठोस पहल हुन सकेको छैन । चिकित्सकले अस्पताल बाहिर सेवा दिँदा केही राहत मिले पनि यो समस्याको समाधान भने होइन ।
Tagged अस्पताल ओपिडी सेवा विरामी सरकारी चिकित्सक
Tags: अस्पताल, ओपिडी सेवा, विरामी, सरकारी चिकित्सक